Hardware bobongolo, Plastic bobongolo, Rotational koronosy, CNC fametrahana mazava tsara Machine, Ddie Casting, CNC Machining Ivision mpanamboatra ary mpamatsy - Shenzhen Xiangfu fametrahana mazava tsara Industry Co., Ltd
Hardware Steel hamolavola
fametrahana mazava tsara Maty Casting
fametrahana mazava tsara manorina
Automobile hamolavola Accessoires
Medical hamolavola faritra
Digital hamolavola Accessories
Home Appliance lasitra
Rotational hamolavola Product Series
ivelan'ny trano Water Box
CNC fametrahana mazava tsara Machine
fametrahana mazava tsara Medical Parts
Custom vacuum mamorona Products
Auto Iantrao Parts
Pet tavoahangy mitsoka hamolavola
Box mitsoka hamolavola
Storage mitsoka hamolavola
Drink tavoahangy mitsoka hamolavola
Haingam-pandeha Railway Parts
Hardware Mambatra mpanamboatra, lasantsy vita amin'ny metaly Shenzhen Xiangfu Precision, manome tsipika sy fanoratana bobongolo, mateza, varotra mivantana ny orinasa, ambany kalitao sy ambany vidiny, taona hiainana, kalitao avo lenta.
Misy sokajy 4 amin'ny Hardware Mold, Hard Steel Steel, ny Hardware Stamping, Precision Die Casting, Precision Forging,
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co, Ltd dia mpamatsy akora vita amin'ny matihanina vita any Meksika, karazana famokarana sy varotra, karazana marika isan-karazany, kalitao ambany ary ambany ny vidiny, modely tanteraka, natao namboarina, varotra mivantana ny orinasa!
> Comsumer Parts Hardware hamolavola> Medical Parts Hardware hamolavola> Car Parts Hardware hamolavola
Plastika Plastika dia fitaovana ao amin'ny indostrian'ny fanodinana plastika izay mifanentana amin'ny milina fanamboarana plastika mba hanomezana vokatra ny plastika ho fanamafisana tanteraka sy refy voafaritra. Noho ny karazana plastika sy ny fomba fanodinana dia sarotra ny firafitry ny milina fanamboarana plastika sy ny vokatra vita amin'ny plastika, noho izany dia samihafa ihany koa ny karazana sy ny rafitry ny Plastika Plastika.
Misy sokajy 4 misy ny solika plastika, accessoires lasantsy fiara, tapana ara-pitsaboana, kojakoja famolavolana diary nomerika, bobongolo fampitaovana ao an-trano, bobongolo fampitaovana trano
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co, Ltd dia mpamatsy plastika vita amin'ny Plastika matihanina any Chine, karazana famokarana sy varotra rehetra, marika manokana, avo lenta ary ambany ny vidiny, modely tanteraka, namboarina, natao ny varotra mivantana ny orinasa!
> Medical Test Machine hamolavola Parts> Medical Machine hamolavola Parts> Fan Machine hamolavola Parts
Rotational Molding dia fantatra koa amin'ny hoe rotomolding, rotaka fanamboarana, rotary fanamboarana, rotary casting, rotary forme, sns Ny fomba fanamboarana dia ny hampiana ilay plastika metered (ranon-tsiro na vovony) amin'ny bobongolo, ary rehefa nohidiana ny bobongolo, dia ataovy. Mihodina eo amin'ny famaky fihodinana roa miolikolika, raha manafana ny bobongolo, ny akora plastika ao anaty lasitra dia voasarona tsikelikely ary miempo ary miraikitra amin'ny sakan'ny lavaka rehetra eo ambanin'ny asan'ny gravity sy ny hafanana, ary miforona ho mitovy endrika amin'ny lava-bato. . Avy eo, dia tarafina sy mamolavola ary nopotehina mba hahazoana vokatra iray tadiavina.
Ny fizotry ny famolavolana fihodinana Nandritra ny dingana famolavolana manontolo, ny plastika dia tsy misy maimaimpoana an-kery ivelany afa-tsy amin'ny gravité.
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co, Ltd dia mpamatsy Rotat ional Molding mpamatsy any Sina, karazana famokarana sy varotra rehetra, marika manokana, kalitao ambany sy ambany ny vidiny, modely tanteraka, namboarina, famerenana mivantana ny orinasa!
> LED Kafe table> seza Desk> LED ambony seza
Ny fahamarinan'ny milina CNC Precision Machine dia nitombo hatramin'ny 10Î¼m ka hatramin'ny 5Î¼m, ary ny hatsaran'ny machining precision dia nohatsaraina 3 ka hatramin'ny 5Î¼m ka hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1.5Î¼m, ary ny fahitsiana vita amin'ny machining ultra-precision dia nanomboka niditra ny haben'ny nanometer (0.01Î¼m ). Mba hahatrarana ny milina haingam-pandeha haingam-pandeha sy avo lenta, ny CNC Precision Machine dia namolavola haingana ny singa miasa ao aminy toy ny jiro elektrika sy motera làlaka, ary niitatra bebe kokoa ny sehatry ny fampiharana azy.
Ny milina CNC Precision dia mizara ho sokajy 6, izany hoe ny Aero Space Parts, High Railway Parts, Automotive Parts, TeleCommunication Parts, Digital Accessories, Precision Medical Parts.
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co, Ltd dia mpamatsy CNC Precision Machine mpamatsy any Sina, karazana famokarana sy varotra rehetra, marika manokana, kalitao ambany sy ambany ny vidiny, modely tanteraka, namboarina, famerenana mivantana ny orinasa!
> Mobile Phone Accessories Parts> Medical seza misy kodiarana Accessories> Medical fitaovana Accessories
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co, Ltd dia orinasa mpanamboatra famandrihana mampiditra ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana .Ny manana departemanta vita amin'ny lamba vita amin'ny lambam-bolo, departemantan'ny orinasam-bolo vita amin'ny plastika, fizarazarana CNC machining, maty ny fanariana sy ny fanadinoana ny sampana orinasa, ny fizarana fitsaboana ny tarehy. ary departemanta fandraharahana fivoriambe hafa.
Ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny serasera, fitaovana fametahana, fitaovana ara-pitsaboana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, fiara, fiaramanidina ary indostria hafa. Araka ny filàn'ny mpanjifa dia manome ny singa vita amin'ny famolavolana vita amin'ny plastika sy metaly, famokarana, tsindrona, tsindrona solika, korosi, vatosokay ary fivoriambe, ary serivisy tokana hafa.Manana departemanta vita tanana haingana, izay afaka manome ny fampandrosoana sy ny famolavolana vokatra sy foto-drafitrasa hafa amin'ny serivisy fanamboarana mba hanomezana ny filan'ny mpanjifa.
MBOLA MISY AZONAO
Azo itokisana ny taona maro amin'ny traikefa amin'ny indostria
Ny orinasa dia manana ekipa fampandrosoana vokatra efa za-draharaha.
Sehatra amin'ny raharaham-barotra isan-karazany
Manokana amin'ny famokarana indostrialy Precision
Matihanina taorian'ny varotra
Miatrika olana isan-karazany aorian'ny varotra
natao in Shina: inona dia mitranga?
Chnynge diny ny vaovao mnynufnycturing: finday Internet amin'ny raharaham-barotra modely ny subversiamin'ny nynd nyt ny snyme fonyana, nyre nylso chnynging nynd na dia subversiamin'ny mnynufnycturing fomba, goavana fahafahana nynd rdinyks ny camin'nytnyin izany.
Anarana mpanjifa ny fitsidihana xiangfu CNC facnyry for fanaraha-maso ary tari-dalana
vacuum mamorona sampan-draharaha, CNC sampan-draharaha, Maty fanariana sampan-draharaha, manorina sampan-draharaha, nohitsakitsahiko sampan-draharaha, 3D pirinty natao tamin'ny Sampan-draharaha. Omeo lasitra ary entana araka ny cusnymer mila.
Rosiana Auto Parts Business Partner
Rosiana Auto Parts Business Partner fitsidihana avy koramin'nyosy fanamboarana amin'ny Feb 28, 2019 Sunshine tsara tarehy partnerï¼ ny Shina varotra representative,Shina
Address: B1227-1288, youson siansa ary teknolojia trano, 1 lalana longhua distrika, Shenzhen, Sina
Fa fanontaniana momba ny ny entana na pricelist, Mba miangavy re fialan-tsasatra yny mailaka ny antsika ary isika dia ho in nyuch ao anatin'ny 24 hnys.
Copyright @ 2019 Shenzhen XIANGFU fametrahana mazava tsara TAOZAVA-BAVENTY CO., LTD. rehetra Rights Voatokana.